12 युरोपमा हेर्न अनौठो जनावरहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 12 युरोपमा हेर्न अनौठो जनावरहरू
ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा रूस, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, ट्रेन यात्रा टर्की, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
रंगीन, विदेशी, र सुविधाहरू र बस्ने ठाउँको असाधारण, तपाईंले यी पाउनुहुनेछ 12 यूरोप मा देख्नको लागि सबैभन्दा अनौठो जनावरहरू. सबैभन्दा गहिरो महासागरहरू बसोबास गर्दै, उच्च आल्प्स, वा हरियो यूरोपीयन वुडल्याण्डमा आराम गर्दै, निश्चित गर्नुहोस् कि यी आश्चर्यजनक जंगली जनावरहरूको खोजीमा तपाईको युरोपमा अर्को पलायन यात्रामा.
1. युरोपमा हेर्न अनौठो जनावरहरू: यूरोपियन लिन्क्स
बस्ने स्विजरल्याण्ड, फ्रान्स, इटाली, र चेक गणतन्त्र, यूरोपियन लिन्क्स एक अनौंठो वाइल्ड क्याट हो. लिन्क्सको छोटो पुच्छर छ, दागहरु संग खैरो फर, हिउँ परेको जाडो ज in्गलमा भेट्न सजिलो.
तपाईंले यस जंगली बिरालालाई घरेलु बिरालोको रमणीय जात भेट्नुहुनेछ, र जंगली दाग ​​चितुवा.
जहाँ म युरोपमा युरोपियन लिन्क्स हेर्न सक्छु?
को Bavarian वन लिन्क्सेस र उनीहरूका सन्तानहरू भेट्टाउने सुन्दर ठाउँ हो.
2. युरोपमा हेर्न अनौठो जनावरहरू: पफिन
तपाईं यी सुन्दर प्राणीहरू समुद्रीतटको चट्टानहरूमा मध्य अप्रिलबाट उत्तम देख्न सक्नुहुन्छ. उदाहरणका लागि, वेस्टर्न वेल्सको स्कोमर द्वीप वन्यजीव र पफिन फोटोग्राफीको लागि एक अद्भुत गन्तव्य हो. साथै, एट्लान्टिक समुद्री पक्षीको प्रशंसा गर्न ब्रिट्नी समुद्री तट अर्को अद्भुत स्थान हो.
Puffins सम्म पुग्छ 30 सेमी लम्बाई र 20 सेमी उचाइ. यसबाहेक, एक सुन्तला रंगको चुच्चो र आँखामा सर्कलको साथ, तपाईंले पाउनुहुनेछ कि यी धेरै राम्रा समुद्री डाँडाहरू समुद्रमा चट्टानहरूमा भेट्न तिनीहरू धेरै सजिलो हुन्छ. संग 90% युरोप मा सम्पूर्ण विश्व जनसंख्या को, तपाईं वर्षको अधिकांश को लागी यूरोप को समुद्री किनारहरु द्वारा सम्पूर्ण कालोनियोंको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ.
म युरोपमा पफिनहरू कहाँ पाउन सक्छु?
फ्रान्सको ब्रिट्नी तट र स्कोमर टापु महान ठाउँहरू छन् जहाँ तपाईं पफिन देख्न सक्नुहुन्छ.
3. युरोपमा हेर्न अनौठो जनावरहरू: साइगा
साइगा एक अद्वितीय मृग हो, दुर्भाग्य, आजकल खतरामा छ. साईगा एक हो 12 सबै भन्दा अनौंठो जनावरहरू जुन तपाईं युरोपमा देख्न सक्नुहुन्छ. यसको असामान्य नाकको साथ, यो अनौंठो जनावर सजिलै चिसो र तातो मौसममा अनुकूलन गर्न सक्दछ, नाकको फारमले यस उद्देश्यका लागि कार्य गर्दछ.
त्यसैले, साईगासँग स्थिर घर छैन र यसले सार्न सक्छ 1000 गर्मी र जाडो बीचको किमी. यसबाहेक, यो प्रति दिन दर्जनौं किलोमिटर हिंड्न सक्छ र दिन को समयमा अधिक सक्रिय छ. सैगाको बारेमा रोचक तथ्य यो हो कि बोटबिरुवा र घाँस बाहेक, यसले अरू जनावरहरूलाई विषाक्त बोटहरू खान्छ.
जहाँ म युरोपमा साईगा हेर्न सक्छु?
तपाई साईगालाई सुन्दर कार्पाथियन पहाड र वुडल्याण्डमा भेट्न सक्नुहुन्छ.
4. युरोपमा हेर्न अनौठो जनावरहरू: पाइन मार्टेन
यदि तपाईं यूरोपियन जंगल र वुडल्यान्डहरूको माध्यमबाट पैदल यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं अनौंठित पाइन मार्टेनलाई भेट्नुहुनेछ. पाइन मार्टेन्स रूखको प्वालमा बस्छन् र धेरै राम्रो पर्वतारोहीहरू हुन्, त्यसैले यदि तपाईं यो विशेष प्राणी हाजिर गर्न चाहनुहुन्छ भने निश्चित गर्नुहोस्.
पाइन मार्टेनहरू चेस्टनट-खैरो रंगमा छन्, घाँटी वरिपरि हल्का पहेलो बिबको साथ. तसर्थ वुडल्याण्डमा पनि, रूखको हाँगामा यो मनमोहक जनावरलाई हराउन गाह्रो हुनेछ, त्यो पहेलो बिबको साथ.
जहाँ पाइन मार्टेन्स म हेर्न सक्छु?
स्कटल्याण्ड र आयरल्याण्ड मा हाइलैंड्स, पाइन मार्टेन हेर्नका लागि उत्तम ठाउँहरू हुन्.
5. युरोपमा हेर्न अनौठो जनावरहरू: यूरोपियन ग्रीन छेपारो
मा 40 सेमी आकार, यो यूरोपियन हरियो छेपारो मिस गर्न वास्तवमै गाह्रो हुनेछ. यो अनौंठो छेपारोमा चहकिलो हरियो पछाडि र पहेंलो पेट छ. चाखलाग्दो कुरा, संभोग मौसममा, पुरुषहरू रंगमा उज्यालो निलोमा परिवर्तन हुन्छन्.
हरियो छेपारो एक उच्च उचाईमा बस्दछ 2000 मीटर, त्यसैले, जब तपाईं अस्ट्रियाका पहाडहरूमा पर्वतारोहण गर्नुहुन्छ, वरिपरि हेर्न निश्चित हुनुहोस्. यदि तपाइँ शरद fromतुदेखि जाडोमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसोभए तपाईंले यी छेपारोलाई गुफा र सुक्ने ठाउँहरूमा भेट्नुहुनेछ. तथापि, गर्मी मा, मार्चबाट सुरु, यी सुन्दरताहरु सूर्य मा ताप्दछन्.
जहाँ म हरियो छेपारो देख्न सक्छु?
तपाईं यो हरियो छेपारो चट्टानमा घाममा बसिरहेको भेट्टाउन सक्नुहुन्छ, यूरोप भर, अस्ट्रिया, जर्मनी, रोमानिया र टर्की सम्म.
6. युरोपमा हेर्न अनौठो जनावरहरू: गुलाबी फ्लेमिंगो
सुन्दर गुलाबी फ्लेमिंगो एउटा मध्ये बास गर्दछ उत्तम वन्यजन्तु प्रकृति भण्डार यूरोपमा. गुलाबी फ्लेमिंगोहरू फ्रान्सको क्यामरगु रिजर्भमा अचम्मको जंगली घोडाहरूसँग बस्छन्. गुलाबी फ्लेमिing्गो कामरोगको प्रतीक भएको छ, यसको जीवन्त गुलाबी रंगहरूमा.
लग्सनमा, मार्शलल्याण्ड, वा उडान, तिनीहरूको सुन्दरता देखाउँदै, गुलाबी फ्लेमिing्गो एकदम अद्भुत दृश्य हो. जब तपाईं हिंड्नुहुन्छ4क्यामरगुमा ट्रेल्स, तपाईंले यो चाँडै बुझ्नुहुनेछ किन यो चरा एक हो 12 युरोपमा हेर्नका लागि सबै भन्दा अनौंठो जनावरहरू.
जहाँ म क्यामार्ग रिजर्वमा गुलाबी फ्लेमिंगो देख्न सक्छु?
क्यामारगु फ्रान्स मा एक विशाल प्रकृति आरक्षित छ. यो अनौंठो चरा हेर्नका लागि, टाउको पक्षीय पार्क.
7. आयरल्याण्डमा व्हेलहरू
यदि तपाईं आयरल्यान्डको दक्षिणमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, दूरी मा कहीं, एक मुठ्ठी टाउको पानीमुनिबाट पप हुन सक्छ. यो Humpback व्हेल हुन सक्छ, आयरल्याण्डको वरिपरि समुद्रमा भव्य र विशाल व्हेल बस्ने.
तिनीहरूको प्रभावशाली र डरलाग्दो आकारको बावजुद, 12-16 मीटर, तिनीहरू हानिरहित र कोमल छन्. यी सुन्दर व्हेल लेट शरद lateतुमा आउँछन्, तिनीहरूको जटिल गीत गाउँदै, बीच टिकाऊ 10-20 मिनेट.
जहाँ म हम्पब्याक व्हेल देख्न सक्छु??
स्कटल्याण्ड, आयरल्याण्ड, इ England्ल्यान्ड ह्वेल हेर्नका लागि महान हो.
8. युरोपमा हेर्न अनौठो जनावरहरू: ब्वाँसाहरू
मनमोहक र भयighten्कर, ब्वाँसो यूरोपमा लोपोन्मुख पशुहरू मध्ये एक हुन्. यी अद्वितीय जनावरहरू सजिलैसँग कुनै पनि निवासमा अनुकूल गर्दछन्, तिनीहरूको छलावरण रंगहरूमा, र आकारमा ठूलो. त्यहाँ धेरै ब्वाँसोहरू छन्, तर औसत ब्वाँसो सम्म पुग्न सक्छ 70 के। जि.
ब्वाँसो ज fore्गलमा बस्ने, प्याकमा, र युरोपमा अत्यधिक संरक्षित जनावरहरू मानिन्छ. त्यहाँ ब्वाँसाहरूको रक्षा गर्न संरक्षण केन्द्रहरू र भण्डारहरू छन् र तिनीहरूलाई उत्तम सर्तहरू प्रदान गर्दछ ताकि तिनीहरू पूर्ण रूपमा विलुप्त हुँदैनन्।.
म युरोपमा ब्वाँसाहरू कहाँ पाउन सक्छु??
इटालीको लिगुरिया क्षेत्र, बभेरियन वन, र पोल्याण्ड ब्वाँसाहरू हुन्’ रुचाइएको आवास.
9. युरोपमा हेर्न अनौठो जनावरहरू: डल्फिन
इटालीको तटवर्ती रेखाको पानीमा छहारी र गाउँदै, राम्रो डल्फिन एक अद्भुत दृश्य हो. जबकि सबैजनाले चित्रहरूमा डल्फिनहरू देखेका हुन सक्छन्, पानी पार्क, वा यूरोपमा चिडियाखानाहरू, यी प्यारा जीवहरूलाई यात्रा र प्रशंसा गर्न केहि पनि तुलना गर्दैन.
डल्फिनहरू हेर्नको लागि उत्तम समय ग्रीष्म isतुमा जब यो तातो छ, र तपाई डल्फिन हेर्ने डु boat्गा भ्रमणमा जान सक्नुहुन्छ.
इटालीमा म कहाँ डल्फिनहरू देख्न सक्छु??
को Cinque Terre को सुन्दर तटहरू र लिगुरियन समुद्री इटालीमा जंगली डल्फिनहरू हेर्नका लागि उत्तम ठाउँ हो.
10. बास्कि Shar शार्कहरू
जब अधिकांश व्यक्तिहरू सुन्छन् “सार्क” सबै भन्दा प्राकृतिक प्रतिक्रिया श्रल र डर हो. तथापि, शक्तिशाली बास्किंग शार्क आकार र विशाल र डरलाग्दो हुन सक्छ, तर यो सार्कले केवल प्लान्क्टन मात्र खान्छ.
त्यसैले, तपाईं यी वरिपरि पूर्ण सुरक्षित महसुस गर्न सक्नुहुन्छ 12 टोन र 12 मिटर माछा. बास्किंग शार्क यूके मा दोस्रो ठूलो शार्क हो, र ग्रीष्मकालमा चट्टानहरूबाट देखीएको सब भन्दा राम्रो. त्यसैले, यदि तपाईं एक ठूलो त्रिकोणीय फिन र खैरो शरीर देख्नुभयो भने, त्यसपछि हेलो तरंग र एक क्यासिंग शार्क तस्वीर को लागी तपाइँको क्यामेरा प्रस्तुत गर्नुहोस्.
जहाँ म बास्किंग शार्क ईन लाई ब्रिटेन देख्न सक्छु?
कर्नेलवेल किनार बन्द, द आइल अफ मेन, र इ England्ल्यान्डको पश्चिमतर्फ धेरै, तपाईं बास्किंग शार्कहरू उनीहरूको प्राकृतिक आवासमा देख्न सक्नुहुन्छ.
11. युरोपमा हेर्न अनौठो जनावरहरू: Wolverine
मेस, मेस, ल्याटिनमा वोल्वरिनको उपनाम हो, ग्लुटनमा अनुवाद गरियो. यो असामान्य नाम मुस्टेलिडे परिवारमा सबैभन्दा ठूलो सदस्य फिट हुन्छ – ठिकसँग उनीहरूको असामान्य भूक छ.
यस कारणले, wolverines खाना को खोज मा टाढा यात्रा गर्न सक्छ, र अब सम्पूर्ण यूरोप भरि फेला पार्न सकिन्छ.
जहाँ म Wolverines देख्न सक्छु?
साधारणतया, भोल्वरिन जनसंख्या रूस मा केन्द्रित छ, टाइगा, र एशिया. यसबाहेक, तपाईं पनि मा wolverines देख्न सक्नुहुन्छ यूके मा हाइलैंड वन्यजीव पार्क.
12. युरोपमा हेर्न अनौठो जनावरहरू: अल्पाइन Ibex
मा माथि माथि 4000 मीटर, हिउँ परेको पहाड चुचुराहरूको बीचमा, चट्टान चट्टानहरु लाई, तपाईंले अल्पाइन आईबेक्स भेट्टाउनुहुनेछ. सी hornहरूसँग जुन बढ्न सक्छ 140 सेमी, यो हिमाली बोका युरोपमा सबैभन्दा प्रभावशाली र अद्वितीय पशु हो.
पहिले, युरोपियन आल्प्स बसोबास गर्दै, अल्पाइन Ibex, बास्किंग शार्क र हरियो छेपारोको तुलनामा भेट्न त्यति सजिलो छैन. यसबाहेक, तिनीहरूको खुरहरूले आइबेक्सको लागि चट्टान आल्प्समा चढ्न र शिकारीहरूलाई उम्कन सजिलो बनाउँदछ.
म कहाँ अल्पाइन Ibex हेर्न सक्नुहुन्छ?
इटालियन आल्प्स र स्विस आल्प्स केही छ अचम्मको दृष्टिकोण वन्यजन्तु र Alpine Ibex हेर्न को लागी.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी वन्यजन्तु अवलोकनका लागि उत्तम ठाउँहरू भ्रमण गर्ने योजनामा ​​सहयोग गर्न खुशी छौं. यूरोप भरिको रेल यात्रा युरोपमा यी अनौठो जनावरहरूको प्राकृतिक निवासहरूमा यात्रा गर्न उपयुक्त छ.
के तपाईं हाम्रो ब्लग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "१२ युरोपमा हेर्न अनौठो जनावरहरू" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funique-animals-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#जनावर अद्भुतवल्ड लाइफहलिडेजवर्ल्डवाइड AnimalsInEurope MostUniqueAnimalsInEurope अद्वितीय एनिमल